Fihenam-bidy fanodinam-bokatra fanodinam-bidy ary fanamboarana | XiongYe
• Ny tena rafitry ny masinina dia vita amin'ny alim-bolan'ny alimina alimina ampifandraisin'ny sendika manokana miaraka amina fiasa milamina sy ny fahombiazany, firafitra mirindra, avo lenta, fandidiana mora sy mety afaka mitsitsy fotoana, tanjaka ary akora; Izy io dia afaka manapaka karazana faritra roa refy sy mihodina, izay ampiasaina indrindra hanapahana bobongolo mihodina miaraka amin'ny fiolahana bebe kokoa toy ny singa eropeana, tabilao T, tsanganana, pellet sns.
• Miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso indostrialy mandeha ho azy, ny masinina dia mandray ny takelaka fanaraha-maso ambony kilasy ao an-trano miaraka amin'ny valiny haingana, ny fahaiza-manao fanoherana mahery vaika, ny fifehezana avo lenta, ny fifehezana ary ny fandidiana azo antoka, ny fahaizan'ny tena-diagnostika sy ny fahaizany mampifanaraka tena, sns. afaka miasa tontolo andro mandritra ny fotoana maharitra.
• Afaka misintona ny karazana tarehimarika rehetra amin'ny CAD / CAM amin'ny solosaina izy ary manapaka mivantana, na afaka manapaka aorian'ny fandefasana ilay rakitra fanapahana avy amin'ny U-disc.
• Miaraka amin'ny sehatr'asa mety, ny masinina dia afaka mampiseho ireo faritra hokapaina, manaraka ny lalan'ny fanapahana ary koa ny toerana misy azy ireo toy ny fetrany, ny fanairana, ny toe-pahasalaman'ny mpiray tsirairay, sns
• Miaraka amin'ny famolavolana mekanika matanjaka sy miorina mafy, ny milina dia afaka miasa tsara miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso isa ary tsy ilaina ny manitsy.
• Ny masinina dia manana famolavolana mihetsika roa miaraka amin'ny avo lenta, izay maharitra.
• Izy io dia miaraka amin'ny motera stepper izay azo fehezina miaraka amin'ny haingam-pandeha mihetsiketsika amin'ny alàlan'ny rindrambaiko afa-tsy ny asa marin-toerana, ny fifehezana ny hafainganam-pandeha maimaim-poana, ny fanaraha-maso avo lenta, sns. Mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanapahana haingam-pandeha sy ny maha-marina ny faribolana. Ny tariby fanamainana 10 dia azo apetraka amin'ny fifehezana isa sy fonosana miorina mba hahafahana manapaka sy mamorona indray mandeha ny tabilao.
• Avelan'ny masinina hiova ny tariby tapaka mandritra ny fanapahana.
• Izy io dia mamela ny famolavolana karazana tarehimarika roa-habe mba hanomezana fahafaham-po ny takian'ny tsena.
Previous: Masinina firakotra
Manaraka: Masinina fanapahana mandeha ho azy feno